आज काठमाडौंमा कहाँ-कहाँ जान्छ ? | suryakhabar.com
Home उर्जा आज काठमाडौंमा कहाँ-कहाँ जान्छ ?
आज काठमाडौंमा कहाँ-कहाँ जान्छ ?
on: ७ चैत्र २०७७, शनिबार ०७:२५ In: उर्जाTags: No Comments
७ चैत्र, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सडक विस्तारलगायतका कारणले आज राजधानी काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा बिजुली कटौती हुने जनाएको छ ।
आज बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह २ बजेसम्म बिजुली कटौती हुने प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ । सडक विस्तारका लागि ११ केभी भूमिगत तार राख्ने कार्यका लागि लाइन काटिन लागेको प्राधिरकणले जनाएको छ । यस्तै, सोही फिडरको बत्तिसपुतली क्षेत्रमा बिजुली कटौती हुनेछ । बिहान ८ बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म बिजुली कटौती हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
पशुपति कलेज, मित्रपार्क, जयवागेश्वरी, मुसे गणेश, गौशाला, तिलगंगा, शारदा स्कूल, सूचना विभागलगायतका क्षेत्रमा लाइन मर्मत गर्न लागिएकाले लाइन काटिन लागेको प्राधिरकणको सूचना छ । प्राधिकरणका अनुसार आज देशका विभिन्न स्थानमा लाइन मर्मत गर्न बिजुली कटौती गर्न लागिएको छ । लाइन कटौती भएका कारण ग्राहकमा पर्न गएको असुविधाप्रति प्राधिकरणले क्षमा मागेको छ ।
संग्रौलाको टिप्पणीः बतासे उपलव्धिको नशामा लठ्ठिएको सरकारले बिताउने भो !
एमालेको केन्द्रिय कमिटी बैठक बस्दै तर नेपाल-खनाल समुह भने सहभागी नहुने
७ चैत्र २०७७, शनिबार ०७:२५